पत्रपत्रिका – Radio Madi
Uncategorized अर्थ र बाणिज्य कुटनिती कुराकानी कृषि खेलकुद भिडियो
सडकमा गाई छाड्दा हिरासतमा
मङ्लबार, मंसिर ११, २०७५ काठमाडौं । सडकमा गाई छोड्दा गाईधनी प्रहरीको हिरासतमा पुगेको भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला । तर, राजधानीमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । सडकमा बेवारिसे अवस्थामा गाई छाडेका कारण गाईधनी प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन् । गत १२…
‘वलात्कारी’ बचाउन नेताको फोन !
मंसिर १०, २०७५ काठमाडौँ – बलात्कारीले राजनीतिक संरक्षण पाउने क्रम बढेको छ । पछिल्ल्लो समयमा बलात्कारका अधिकांश घटनामा अपराधीलाई जोगाउने दबाबसहित नेताहरुको फोन आउने गरेको रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले बताइन् । केहि दिन अघिमात्रै पनि…
कर्मचारी समायोजन : सत्तापक्षबाटै विरोध किन ?
सोमवार, मंसिर १०, २०७५ काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन् । संसदको नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउन सत्तापक्ष सांसदले माग गरेका हुन् । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न…
आइतवार, मंसिर ९, २०७५ काठमाडौं ९ मंसिर । जहाजमा चढ्न नदिएपछि छोरीका हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका बेला बिरामी परेका निर्मलाका बुबा यज्ञराज र उनका आफन्त कैलालीको गेटा विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन् । उपचारका लागि काठमाडौं…
आइतवार, मंसिर ९, २०७५ काठमाडौं । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट सुरु गर्न लागेको छ । महिला,…
तीन वर्षदेखि बिहे रोकिएको गाउँ
शनिबार, मंसिर ८, २०७५ काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ- नेपालमा यस्तो पनि एउटा गाउँ छ, जहाँ तीन वर्षदेखि कुनै बिहेबारी भएको छैन। बिहे गर्ने उमेरका युवायुवती नभएर होइन। न त बिहे परम्परा बहिष्कार गरेरै हो। सीमा क्षेत्रमै रहेकाले र…
शनिबार, मंसिर ८, २०७५ ललितपुर : कान्जोस्योम गाउँपालिकाको कार्यालयमा मानिसको चहलपहल बढ्दै छ। गाउँपालिकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले नागरिकता शिविर सञ्चालन गरेको छ। त्यही शिविरमा नागरिकता बनाउन आएकी छन्— ६२ वर्षीया तार्जीमाया तामाङ।…
सन्तान थरीथरिका: बाग्लुङमा छोराले गरे आमाको हत्या
बिहिबार, मंसिर ६, २०७५ काठमाडौं । बाग्लुङका एक ९० वर्षीय वृद्धाको छोराले बञ्चरो प्रहार गरेर हत्या गरेका छन् । जैमिनी नगरपालिका १० राङखानीका ६० वर्षीय कर्णबहादुर श्रीसले आमा हरिकलालाई मंगलबार हत्या गरेका हुन् । आमाको हत्यापछि श्रीसले…
बुधबार, मंसिर ५, २०७५ काठमाडौं ।नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै सरकारी विद्यालयका शिक्षक छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा सरकारी…
मङ्लबार, मंसिर ४, २०७५ काठमाडौं । तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट अन्त सारिए नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी मकवानपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलसम्बद्ध युवा संगठनले दिएका छन् । सोमबार मिडिया नेपाल मकवानपुरले हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा युवा…